Thierry Rakotonarivo - Lalàm-panorenana : Azo atao alohan’ny fifidianana filohan’ny repoblika -
AccueilRaharaham-pirenenaThierry Rakotonarivo – Lalàm-panorenana : Azo atao alohan’ny fifidianana filohan’ny repoblika
26/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manoloana ny resa-be izay mandeha tao ho ato mikasika ny fanitsiana ny lalàm-panorenana dia noezahina ny tady teknisianina havanana amin’ny lalàna sy ny fifidianana, ka anisan’ny nanaiky nitondra fanazavana ara-teknika i Thierry Rakotonarivo, izay sady mpikambana ao amin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, no sady Admnistratera sivily ihany koa. Raha ny fanazavana nomeny dia azo tanterahina alohan’ny fifidianana filohan’ny repoblika ny fantsiana ny lalàm-panorenana “ ny ahiahin’ny olona dia hoe mety mampihemotra ny prezidansa ny fanitsiana ny lalàm-panorenana, tokony tsy misy olana izany mihitsy ny fanatanterahana izany satria mbola manana 15 volana isika . Ny lalàna dia milaza fa 90 andro ny fiantsoana ny mpifidy, izany hoe any amin’ny volana novambra sy desambra any ho any vao hotanterahina ny fifidianana izay ho filoham-pirenena , ka tsy misy mihitsy ny sakana akory” hoy hatrany i Thierry Rakotonarivo.
Raha ny fanazavana izay nomen’ ity manam-pahaizana amin’ny lalàna sy ny fifidianana ity ihany eo amin’ny lafiny ara-teknika dia “raha toa ka te tanteraka tokoa io fifidianana momban’ny lalàm-panorenana io tokony ho atao mialohan’ny volana jona 2018 izany”. Noho izany ny fanazana ara- teknika toa izany dia tokony hampilamina tanteraka ny resa-be misy etsy sy eroa, satria tsy misy resaka fanemorana fifidianana tokoa ny resaka eto fa dia fanitsiana ny tsy mety fotsiny ihany, mba hizoran’ ny fiainam-pirenena araka ny tokony izy. Raha ny fanazavana noetin’i Thierry Rakotonarivo hatrany dia “alohan’ny zava-drehetra, dia tokony hifanaraka tsara ireo mpanao politika mba tsy hisian’ny olana eto amin’ny firenena “hoy hatrany izy. Mazava io fanazavana izay noentiny io satria fanatsarana tokoa no ilaina.
Tsapa sy re nandritra ny kabaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fahendrena sy ny fitiavan-tanindrazana indrindra ny fitiavana ny vahoaka malagasy, ho azy dia efa ela taorian’ny fahaleovantena isika no tokony ho tafita, saingy teo hatrany ...Tohiny